Tuesday, May 14, 2013 Wednesday, May 15, 2013 Michael Reynolds kwuru
dị ka a dijitalụ gị n'ụlọnga na azụmaahịa kemgbe afọ 1996, anyị enweela ohere ịmepụta ọtụtụ narị websaịtị ụlọ ọrụ na enweghị uru. Anyị amụtala ọtụtụ n'okporo ụzọ ma nweta usoro anyị ruo na mmanụ nwere mmanụ.
Usoro anyị na-amalite site na a nhazi weebụsaịtị, nke na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ izizi mbụ ma were ya kọwaa onye ahịa ahụ tupu anyị erute n'okporo ụzọ nke ikwuputa na imebe.
N'agbanyeghị eziokwu na usoro a na-arụ ọrụ nke ọma, anyị ka na-ezute RFP ahụ na-atụ ụjọ site n'oge ruo n'oge. Ọ nwere onye hụrụ RFPs n'anya? Echeghị m otú ahụ. Ma ha na-anọgide na-abụ ụkpụrụ maka òtù dị iche iche na-achọ mmalite mgbe ha chọrọ ọrụ mkpokọta weebụ.
Nke a bụ ihe nzuzo: weebụsaịtị RFPs anaghị arụ ọrụ. Ha adịghị mma maka ndị ahịa na ha adịghị mma maka ụlọ ọrụ ahụ.
Nke a bụ akụkọ na-egosi ihe m na-ekwu. Otu nzukọ bịara nso nso a na-achọ enyemaka na weebụsaịtị ha. Ha nwere RFP tinyere ọnụ karịa ịkọwapụta usoro atụmatụ, ụfọdụ arịrịọ pụrụ iche, yana ihe ndị ịchọrọ ịchọrọ (gụnyere ụkpụrụ ochie ochie: "anyị chọrọ ka weebụsaịtị anyị dị mfe ịnyagharịa").
Ruo ugbu a, dị mma. Agbanyeghị, anyị kọwara na usoro anyị na-amalite site na blueprint websaịtị, nke emebere iji nye anyị obere ntụle, ịhazi, na ịdepụta oge saịtị tupu anyị etinye ọnụ. Ha kwenyere itinye oge RFP n'akụkụ ma malite site na ụkpụrụ na anyị wepụrụ ihe.
N'oge nzukọ ụkpụrụ mbụ anyị, anyị gwuru ụfọdụ ebumnuche ụfọdụ, jụọ ajụjụ, ma tụlee ọnọdụ ahịa. N'oge mkparịta ụka anyị, ọ bịara doo anya na ụfọdụ n'ime ihe ndị dị na RFP adịghịzi mkpa ozugbo anyị zara ụfọdụ ajụjụ ha ma nye anyị ndụmọdụ dabere na ọtụtụ afọ nke ahụmịhe.
Anyị chọpụtakwara ụfọdụ echiche ọhụrụ etinyeghị na RFP. Onye ahia anyi nwere obi uto na anyi "bulie" ihe ha choro ma jide n'aka na anyi nile di n'otu uzo banyere ihe atumatu a.
Na mgbakwunye, anyị mechara chekwaa ego ndị ahịa. Ọ bụrụ na anyị hotara ọnụahịa dabere na RFP, anyị gaara adabere na ihe ndị na-ezighi ezi maka nzukọ ahụ. Kama, anyi gakwuuru ha ka ha nye uzo ozo odi nma ma dikwa onu ahia.
Anyị na-ahụ ọnọdụ a ugboro ugboro, ọ bụ ya mere anyị ji etinye aka na usoro ụkpụrụ ụlọ na ihe kpatara na anyị ekwenyeghi na weebụsaịtị RFPs.
Nke a bụ nsogbu bụ isi na RFPs - nzukọ a na-ede ha na-arịọ maka enyemaka, mana ha na-anwa ịkọwa amụma ezi ụzọ. Kedu ka ị si mara na ịchọrọ ọkachamara ọkachamara nhazi ngwaahịa? O doro gị anya na ịchọrọ itinye mpaghara naanị ndị otu? Kedu ihe kpatara iji họrọ njirimara a karịa njirimara ahụ? Ya na ịga ụlọ ọgwụ ga-eme nchoputa yana ọgwụgwọ, mana ịrịọ maka ọgwụ akọwapụtara tupu ị gaa ọfịs ya.
Yabụ ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ọrụ webụsaịtị ọhụụ, biko gbalịa ịkwụsị omume RFP. Malite na mkparịta ụka na atụmatụ na gị n'ụlọnga (ma ọ bụ ikike gị n'ụlọnga) na-a ọzọ agile obibia gị na ebe nrụọrụ weebụ oru ngo. Imirikiti oge ị ga - achọpụta na ị ga - enweta nsonaazụ ka mma ma ị nwere ike ịchekwa ego!
Mee 14, 2013 na 5: 25 PM
Ekwetaghị m. RFPs abụghị naanị echiche dị egwu maka weebụsaịtị, ha bụ echiche dị egwu maka ọrụ ọ bụla.
Ihe kpatara ya bu ndi ikwuru n’elu. Mana nke a bụ ihe kachasị mkpa mere RFPs anaghị arụ ọrụ: ha chere na onye ahịa ahụ emeelarị ihe ọhụụ niile.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta ihe na-enweghị enyemaka, gịnịzi ka nke ahụ na-ekwu banyere otu echiche gị na enyemaka ị chere na ị chọrọ?
Mee 15, 2013 na 1: 48 PM
Daalụ maka nzaghachi, Robby! Ee, ekwenyere m… Achọrọ m ịrapara na ihe m maara 🙂
Mee 14, 2013 na 6: 29 PM
Aga m eweta atụmatụ sitere na RFP maka weebụsaịtị, mana ọ ga-achọ nnukwu ego site n'aka onye ahịa ebe ọ bụ na anyị ga-enwe mmekọrịta dị mma karịa ọrụ ọrụ.
Mee 15, 2013 na 7: 51 AM
Ditto ihe Robby kwuru.
Mee 16, 2013 na 11: 47 AM
Kwuru nke ọma. Nke a bụ eziokwu maka weebụsaịtị… yana ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ọzọ na-abụghị ngwaahịa zuru oke. Ndị RFP na-anwa ịkọwapụta ihe (yabụ na anyị nwere ike iji ha tụnyere na mpempe akwụkwọ) nke na-emegide ọnụọgụ. Ọ gwụla ma ị na-arịọ maka nkwuputa na, sịnụ, ụgbọ okporo ígwè ụgbọ oloko nke ígwè ore (na ikekwe ọbụnadị mgbe ahụ!), Ikwesiri ịchọpụta ndị ọrụ ị tụkwasịrị obi ma hapụ ha ka ha bụrụ ndị ndụmọdụ maka usoro a. Ma ọ bụghị ya, nsonaazụ ya bụ nke "dị mma na akwụkwọ," mana nke anaghị arụ ọrụ nke ọma na ụwa n'ezie.
Mee 16, 2013 na 12: 43 PM
Hụrụ ya n'anya! Daalụ, Chris.
Mee 16, 2013 na 12: 23 PM
Mmechi: Ọtụtụ n'ime ndị ahịa amaghị n'ezie ihe ha chọrọ, mana ọtụtụ n'ime ha amaghị ihe ha chọrọ …… ozi ọma ebighi ebi site na ụlọ ọrụ… ..